पन्जाबलाई जित्नैपर्ने खेलमा, दिल्लीलाई प्ले-अफ स्थान पक्का गर्ने अवसर – WicketNepal
पन्जाबलाई जित्नैपर्ने खेलमा, दिल्लीलाई प्ले-अफ स्थान पक्का गर्ने अवसर
Sakar Sedhain, २०७७ कार्तिक ४, मंगलवार १४:२८
युएईमा जारी १३ औं संस्करणको आईपिएल अन्तर्गत मंगलबार ३८ औं खेलमा केएल राहुल कप्तानीको किङ्ग्स-११ पन्जाब र श्रेयस अय्यर कप्तानीको दिल्ली क्यापिटल्सबीच प्रतिस्पर्धा हुदैँछ। खेल नेपाली समय अनुसार रातीको ७:४५ बजे दुबई स्थित दुबई अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा सुरु हुनेछ।
पन्जाब :- प्रतियोगितामा खराब सुरुवात गरेको पन्जाबले सुरुवाती ७ खेलमा मात्र १ जित दर्ता गरेको थियो। पछिल्लो २ खेलमा जित हात पार्दै पन्जाबले शिर्ष-४ मा पर्ने सम्भावना जिवित राखेको छ। खेलाडीहरुको उत्कृष्ट व्यक्तिगत प्रदर्शन बाबजुद निर्णायक मोडमा चुक्दा पन्जाबले हार बेहोर्नु परेको छ।
ओपनरद्वय कप्तान राहुल र मायाँक अग्रवाल उत्कृष्ट लयमा छन्। हालसम्म राहुल र अग्रवाल ९ खेलमा ५२५ र ३९३ रन बनाउदै अरेन्ज क्यापको दौडमा क्रमश: पहिलो र दोस्रो स्थानमा छन्। ‘युनिभर्सल बोस’ क्रिस गेलले मौका पाएको पछिल्लो २ खेलमा जितमा अहम योगदान दिएका छन्। निकोलास पुरन राम्रो लयमा छन्। ग्लेन म्याक्सवेलको प्रदर्शन टिमको चिन्ता बनेको छ जसले ८ इनिंगमा मात्र ५८ रन बनाउन सकेका छन्।
पन्जाबको कमजोर पक्ष डेथ ओभर बलिंग हो। हालसम्म अर्शदिप सिंह र मोहम्मद शामीको प्रदर्शन तारिफयोग्य छ। सिंहले पछिल्लो ४ खेलमा ६ विकेट इयेका छन् भने रन दिन पनि कन्जुसी गरिरहेका छन्। युवा लेग-स्पिनर रभी बिश्नोई र मुरुगन आश्विनले राम्रो प्रदर्शन गरेका छन्। पन्जाब डेथ ओभर विशेष बलर क्रिस जोर्डनबाट अझ राम्रो प्रदर्शन चाहन्छ। ब्याटिंगमा फ्लप भएता पनि म्याक्सवेलले बलिंगबाट योगदान दिरहेका छन्। उनले पावरप्लेमा किफायती बलिंग गर्दा कप्तानसँग प्रशस्त बलिंग विकल्प रहने गर्छ।
दिल्ली :- ९ खेलमा १४ अंक बटुल्दै अंकतालिकाको शिर्ष स्थानमा रहेको दिल्ली निकै सन्तुलित देखिन्छ। सुरुवाती खेलहरुमा राम्रो प्रदर्शन गरेका पृथ्वी शले पछिल्लो खेलहरुमा रन बनाउन संघर्ष गरेका छन्। अर्का ओपनर शिखर धवन फर्ममा फर्किएका छन् जसले पछिल्लो ३ खेलमा २ अर्धशतक र चेन्नाई विरुद्ध शतक ( १०१* ) बनाएका थिए। कप्तान श्रेयस ऐयरले परिपक्वता ब्याटिंग गरेका छन्। मार्कस स्टोइनिस र अक्षर पटेलले ब्याटिंग अलराउण्ड क्षमता देखाइरहेका छन्। रिशभ पन्त चोटिल हुँदा मौका पाएका अजिंक्य रहाने र एलेक्स केरीले भने छाप छोड्न सकेका छैनन्।
दिल्लीको बलिंग मजबुत पक्ष हो। कागिसो रबाडा र एनरिक नोर्किया उत्कृस्ट लयमा छन्। हालसम्म रबाडाले १९ विकेट हात पार्दै पर्पल क्याप नाम गरेका छन् भने नोर्कियाले १२ विकेट लिईसकेका छन्। बायाँ हाते फिंगर स्पिनर अक्षर पटेल विरुद्ध रन बनाउन विपक्षि टोलिलाई कठिन भैरहेको छ। रभीचन्द्रन आश्विनले किफायती बलिंग गर्दै महत्वपुर्ण विकेट दिलाएका छन्। तुषार देशपाण्डेले पछिल्लो २ खेलमा मौका पाएका छन् जसले ३ विकेट लिंदा माथिल्लो क्रमका ब्याट्सम्यानलाई आउट गरेका छन्।
पछिल्लो भेट :- जारी सिजनको दोस्रो खेलमा दिल्ली र पन्जाब विरुद्ध प्रतिस्पर्धा भएको थियो। सनसनीपूर्ण खेल सुपर ओभरमा पुग्दा रबाडाले घातक बलिंग गर्दै दिल्लीलाई जित दिलाएका थिए। दुबई अन्तराष्ट्रिय स्टेडियममा भएको खेलमा दिल्लीले स्टोइनिसको (२१ बलमा ५३ रनको) विस्फोटक ब्याटिंगको मद्दतमा १५८ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो। अग्रवालले ६० बलमा ८९ रनको पारी खेल्दै खेल सुपर ओभरतर्फ डोर्याएका थिए। सुपर ओभरमा रबाडाले घातक बलिंग गर्दा पन्जाब २ रनमा समेटिएको थियो जसपछि दिल्लीको जित सहज बनेको थियो।
हेड टु हेड :- हालसम्म यी दुई टोलिबीच कुल २५ पटक प्रतिस्पर्धा भएको छ। पन्जाब १४ तथा दिल्ली ११ खेलमा विजयी भएको छ।
दुबै टिममा हुनसक्ने परिवर्तन :-
पन्जाब :- ब्याटिंगमा फ्लप भएता पनि म्याक्सवेलले किफायती बलिंग गर्दै ४ ओभर गर्ने गरेका छन्। पन्जाबले उनमा भरोसा देखाउदै आफ्नो विजयी टिमलाईनै मैदान उतार्न सक्छ।
पन्जाबको सम्भावित अन्तिम ११ : केएल राहुल (विकेटकिपर) (कप्तान), मायाँक अग्रवाल, निकोलस पुरन, क्रिस गेल, ग्लेन म्याक्सवेल, दिपक हुडा, रभी बिस्नोइ, क्रिश जोर्डन, मोहम्मद शामी, मुरुगन आश्विन , अर्शदिप सिंह
रिशभ पन्त टिममा फर्कन सक्छन्
दिल्ली :- दिल्लीले पन्त फिट भएर खेल्ने सम्भावना धेरै छ। उनि खेलेको खण्डमा एलेक्स केरि र अजिंके रहाने बाहिर बस्नुपर्नेछ जसको स्थान शिमरन हेटमायरले लिन सक्छन्।
दिल्लीको सम्भावित ११ : शिखर धवन, पृथ्वी श, श्रेयस ऐयर, शिमरन हेटमायर, रिशभ पन्त, मार्कस स्टोइनिस, अक्षर पटेल,रभीचन्द्रन आश्विन, कागिसो रबाडा, एनरिक नोर्किया, तुसार देसपाण्डे
सन्दिपले मौका पाउने सम्भावना :
सन्तुलित देखिएको दिल्लीले टिम सम्मिश्रणमा परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिदैन र त्यस्तो संकेत पनि छैन। लेग स्पिनर अमित मिश्राको प्रतिस्थापनमा दिल्लीले भारतीय लेग स्पिनर प्रभिन दुबेलाई भित्र्याएको छ। आश्विन र अक्षर पटेलको प्रदर्शन राम्रो रहीरहेको हुँदा तथा ४ विदेशी खेलाडीको कोटा पक्का जस्तो हुँदा सन्दिपको सम्भावना नरहेको हो। पछिल्लो खेलहरुमा विकेट सुस्त हुँदै गैरहेको हुँदा दिल्लीले लिग चरणको अन्तिम खेलमा ३ जना स्पिनर लिएर खेल्न सक्छ तर त्यसको लागि टिमले शिमरन हेटमायरलाई बाहिर राख्नुपर्छ। देब्रे हाते ब्याट्सम्यान हुनाले पनि हेटमायरलाई दिल्लीले अन्तिम-११ बाहिर राख्न चाहदैन। अब पन्जाब बिरुद्ध खेल जितेको खण्डमा दिल्लीले प्लेअफमा स्थान पक्का गर्नेछ जसपछि शिर्ष-२ स्थान पक्का गरेको खण्डमा टिमको सम्मिश्रण परिवर्तन गर्दा मात्र सन्दिपले मौका पाउन सक्छन्। नत्र बिभिन्न कोण बाट विश्लेषण गर्दा पनि सन्दिपलाई अन्तिम-११ मा राख्न मुस्किल छ।
१. पन्जाब कप्तान केएल राहुल लिगमा १०० छक्का प्रहार गर्नबाट मात्र १ छक्का टाढा छन्।
२. क्रिस गेल पन्जाबको प्रतिनिधित्व गर्दै १००० रन बनाउनबाट ६५ रन टाढा छन्।
३.लिगमा ५००० रन बनाउनबाट शिखर धवन ६३ रन टाढा छन्।